Chad nyika yakakomberedzwa nedzimwe iri kumaodzanyemba kweAfrica. Nyika dzakakomberedza Chad dzinoti: Sudan kumabvazuva, Central African Republic kuchamhembe, Cameroon neNigeria kuchamhembe kwakadziva kumadokero uye Niger kumadokero.
Chad yakapatsanuka kuita matunhu mana anoti: gwenga riri kumaodzanyemba; nzvimbo isina mvura yeSahel iri pakati penyika; nenzvimbo yemiti nesora iri kuchamhembe. Nyanza yeChad panova ndipo panobva zita renyika iyi ndiyo yechipiri pakukura kwematoro muAfrica.
Gutaguru reChad rinonzi N'Djamena uye ndiro guru kupinda mamwe maguta. Nyika yeChad ine marudzi nendimi dzinotaurwa dzinodarika 200. ChiArab neFrench ndiyo mitauro yekumahofisi. Islam nechiKristu ndizvo zvitendero zvinotevedzwa nevanhu vazhinji.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chad&oldid=49594"
This page was last edited on 21 Ndira 2017, at 05:00.